Adobe, Twitter iyo warbaahinta guud miyaan la dagaallami doonaan qoto dheer? : Martin Vrijland
Adobe, Twitter iyo warbaahinta guud miyaan la dagaallami doonaan qoto dheer?
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 6 November 2019	• 0 Comments
In buuggayga cusub Waxaan sharraxayaa sida qoto-dheer looga dabaqi karo qaybaha kala duwan ee warbaahinta, laakiin sidoo kale warbaahinta bulshada iyo aaladaha doodaha, waxaanan sharraxaad ka bixinayaa sida ay warbaahintu u lahayd dhammaan farsamooyinka lagu soo rogi karo warbahin muddo tobanaan sano ah. Taasi waxay dad badan u diidaan sidii shirqool, khiyaamo in uu jiro had iyo goor qof iyaga ka mid ah oo qalbigiisu ka hadli doono, wuxuu iska indhatirayaa aqoonta aqoonta. Haddii shirkadaha warbaahinta iyo joornaalada ay ka helaan wararka ka soo baxa isha 1 isla markaana hal il kaliya ay tahay, tusaale ahaan, Xafiiska Guud ee Warbaahinta Dutch-ka ee John de Mol, markaa koox yar oo keliya oo ka mid ah ANP ayaa u baahan inay ka warqabaan howlgalada noocaas ah. Kooxda gudaheeda sidoo kale, kala qeybinta aqoonta waxay xaqiijin kartaa in dad yar ay u baahan yihiin inay ogaadaan xeeladaha iyo khiyaamada suurtagalka ah.
Waxaan had iyo jeer aad iyo aad ula yaaban ahay kalsoonida weyn ee ay ku qabaan warbaahinta, sidoo kale waxaan ka mid ahay kuwa loogu yeero kuwa toosay. Haddii ficil celintaada ugu horeysa ee sheyga wararka uu wali argagaxo ama “yahay mid la yaab leh”, markaa maysan gaarin waqtigaas oo dhan sida dadka loogu riixayo sharciga cusub, adag ee la xiriira hawlgallada nafsiyeed. Dadku way kudayaraan inay ka hadlaan 'wacyigelinta' waxayna rumeysnaadaan in mararka qaar hawlgal calan been abuur ah la qabtay, laakiin taasi waa wax fog fog oo runti kama dhacdo Nederland, maxaa yeelay Nederlandku waa dad la isku halleyn karo oo dhammaanteen waxaan hibo ku siinnay dadka dhexdiisa. warbaahinta iyo siyaasada iyo siyaasiyiin badan oo xasaasi ah oo ku sugan The Hague. Dadka sida Jeroen Pauw iyo Matthijs van Nieuwkerk ayaa wali gacanta kusugan manaan arag wali inay yihiin maamuleyaal fikradeed oo casriyeysan oo wadahadalo la leh abuurida muuqaalka dhaliilaha iyo ka goynta suurtagalnimada ogaanshaha sida khiyaanada uu u dheer yahay. . Wali ma aaminsani in mucaaradka la xakameyn karo.
Haddii, qalliinka cilmi nafsiga ah ee qof walba uu ku tuhmayo inuu yahay war been abuur ah, aad wada hadal dhab ah la gasho, oo aad la yeelato khubaro halis ah iyo qiiro badan, markaa qof walba si toos ah ayuu u aamini doonaa. Hadana haddii aad ku soo celiso wararkaas dhamaan idaacadaha, joornaalada iyo dhamaan wararka, qof walbaa wuu qancaa. Awoodda is-qancinta waxaa lagu xoojiyaa waxa loogu yeero laf-dhabarta warbaahinta kuwa kale, kuwaas oo dhammaantood si wada jir ah looga aamuso inta lagu jiro hawlgallada nafsiyeed. Waxay ilaashadaan waxa loogu yeero baraaruga laakiin waxay diiradda saaraan waxyaabo ay ka mid yihiin 911, JFK, dayaxa soo degga iyo dhammaan noocyada kale ee wararka hore ama 'news miyirka'; sidaas darteed kuwa ku hayaa dhab ahaan kuwa ku jira xaalad qiiro leh oo ku saabsan (ku dhawaad ​​maalin kasta) ciyaarista warar been abuur ah oo la soo saaray si ay u fuliyaan ajande siyaasadeed. Labada warbaahinta iyo warbaahinta kaleba waxay u jiraan inay dadka ka ilaashadaan 'Wag the Dog' (filim laga soo bilaabo 1997) hababka warbaahinta iyo wadajirka Truman Show (filimka ka socda 1998) ee dadka lagu hayo. "Habka ugu wanaagsan ee mucaaradka loo xakameeyo waa inaad adigu hogaamiso naftaada"
Adobe, waa shirkadda sameysa softiweer garaafyo ah, tusaale ahaan, aflaanta filimka lagu qori karo, ku dhawaaqay maalin ka hor shalay si looga wada shaqeeyo Twitter iyo New York Times. Waxay rabaan inay soo bandhigaan heerka xaqiiqada tusmada. Buuggayga horeba waxaan ugu dhawaaqay in tani ay soo socoto oo ay u muuqan karto sidii hindise cajiib ah, oo ay u badan tahay in laga hortago "warshadaha wararka Ruushka ee been abuurka ah" inay sameeyaan fiidiyowyo been abuur ah si ay uga caawiyaan Donald Trump inuu ku guuleysto doorashada soo socota, laakiin Qof kasta oo haya furaha jaangooyadaan xaqiiqada ah, mabda 'ahaan, wuxuu oran karaa in fiidiyow kasta oo ka socda "ilo la oggolaaday" inuu yahay mid dhab ah oo qof kasta oo dhib ku ah inuu dhaho waa war been abuur ah. Xaqiiqdii; waxaan sida muuqata u arki doonnaa filimada been abuurka ah ee lagama maarmaanka u ah waqtiga soo socda si aan taxadar dheeri ah ugu yeelano dhibaatada. Waxaan is barbar dhigi karnaa goobaha beenta ah ee wararka si ula kac ah loo qorsheeyay, kuwaas oo loogu talagalay inay awood u yeeshaan inay dhahaan “U fiirso goobo warar been abuur ah oo jira, marka waa inaan sameysanaa nooc 'wasaaradda runta' Facebook iyo faafreebka warbaahinta bulshada". Heerarkan xaqiiqnimada ee cusubi kama badnaan doonaan intaas: George Orwell 1984 wasaaradda caddaynta runta.
Hadda shaki la'aan waxaa jiri doona khabiiro lagu casuumay mar kale miiska Jeroen Pauw si uu u sharraxo sida ugu wanaagsan oo ay lagama maarmaanka u tahay sumadda tayada leh, laakiin haddii wakaaladaha waaweyn ay helaan lambar sir ah oo ay ku ansixiyaan dhammaan wararkooda been abuurka ah, waad xasuusataa maahan waxa aad ka heleyso xalkaas oo runtii kaliya waxay xoojineysaa kali kali ku saabsan soo saarista wararka been abuurka ah.
Soodhawrka xiriiriya: engadget.com
Maxay yihiin iyo mudada ay astaamahani hareeyeen?
NOS iyo RTL waxay si buuxda fiiro gaar ah u siinayaan si ay u daboolaan wax soosaarkooda qotoda dheer
Dilkii labalaha ahaa ee Gina iyo Marinus ee ka dhacay shineemada Pathé Groningen
'Qoyska cirfiidka' PsyOp (qalliinka maskaxda): ka takhalusida xorriyaddaada oo soo bandhiga 'booliska maskaxda'
Tags: Adobe, heerka xaqiiqada, content, qoto dheer, featured, warbaahinta, wararka been abuur ah, cusub, waqtiga, Twitter, York
« Buugga cusub ee Martin Vrijland 'Xaqiiqada sida aan u aragnay' waxay diyaar u tahay gudbinta!
Qareenka toogashada Philippe Schol iyo warbixinta afduubka been abuurka ah ee Schiphol »
Guud ahaan Wadarta: 14.088.726
Waa maxay sababta Trump uusan u ahayn antiist globalist laakiin aristocracy kale oo pawn ah
Riffian op Waa maxay sababta Trump uusan u ahayn antiist globalist laakiin aristocracy kale oo pawn ah
SandinG op Waa maxay sababta Trump uusan u ahayn antiist globalist laakiin aristocracy kale oo pawn ah
Ku biir 1.688 macaamiisha kale